Polychromatic: Iyo Isina kufanira GUI yekugadzirisa Razer Peripherals paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Razer chiratidzo chakakurumbira maererano nemipendero, kunyanya keyboards, mbeva, uye kumwe kutonga kweiyo nyika yekutamba. Pamusoro pekutsigirwa muLinux, zvimwe zvakapusa zvekugadzirisa zvinhu zvaidikanwa kuti zvikwanise ivo kuzvido zvedu, uye nekuda kweizvozvo ivo vatangisa iyi huru GUI inonzi Polychromatic kukwanisa kumisikidza zvese zvinongedzo zveRazer brand mune yedu Linux distros.
Iyo GUI inobvumidza huwandu hukuru hwekugadzirisa pane zvinongedzo, uye kunyangwe iri kuvhurwa kwete official yakagadzirwa nevatengi vakazvimiririra ve Razer, chishandiso chine simba uye chiri nyore. Polychromatic 0.3.8 yakatoburitswa, iine kumwe kuvandudzwa pane zvakapfuura kuburitswa. Iyo purojekiti idiki, asi inoshanda uye zvirokwazvo ichakubatsira iwe zvakanyanya nemagadget ako kubva kufemu ine mbiri.
Polychromatic inongova yekumberi-kumagumo, iyo GUI yeRazer madhiraivha eiyo Linux kernel. Sezvandinotaura, hachisi chirongwa chepamutemo, asi hapana chakaipa pane izvo. Pakati sarudzo dzakapihwa ndeavo ekugadzirisa akawanda makirabhu eBlackWidow, DeathStalker, Chroma, Razer nhevedzano, pamwe neDealthAdder, Firefly, Mamba, Naga mbeva, nezvimwe. Uye zvechokwadi zvakare zvinokwanisika kugadzira kumisikidzwa pane mamwe madhizaina seBlade Pro, Razer Core, Kraken, Blade Stealth, nezvimwe.
Nezve iyo Polychromatic kuisirwa, unogona kutsvaga iyo package mune zvinyorwa zveyaunofarira kugovera, uchikwanisa kushandisa anodiwa mapakeji manejimendi ekushandisa. Ehezve, kare iwe uchafanirwa kunge wakaisa iyo mukuru weRazer driver saka inogona kushanda sezvo isingashande nema generic madhiraivha. Kuti uwane rumwe ruzivo iwe unogona kubvunza iyo Github mapeji uko kwaungawana kodhi ye Razer Vanotyaira y Polychromatic nezvinodiwa kurodha pasi, pamwe nezvinyorwa kana ruzivo pamapurojekiti aya ...
Y kunakidzwa yezvimisikidzo zvitsva nemazita matsva emitambo yeLinux!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Polychromatic: iyo isiri yepamutemo GUI yekumisikidza Razer zvigadzirwa paLinux